Wadahadalada u dhexeeya Xukuumadda Somaliland iyo kooxda Cali Khaliif oo la filayaa inay dhawaan ka bilaabmaan Caasimadda Itoobiya. |
Wadahadalada u dhexeeya Xukuumadda Somaliland iyo kooxda Cali Khaliif oo la filayaa inay dhawaan ka bilaabmaan Caasimadda Itoobiya.
Addis Ababa (GNN)-Cali Ciise oo ah Guddoomiyaha Guddida uu horjoogaha Maleeshiyaadka Khaatumo Cali Khaliif Galaydh u magacaabay inay ka qayb galaan wadahadalada Somaliland iyo kooxda Cali Khaliif, ayaa maalmihii udambeeyey ku hawlanaa abaabulka iyo gogol xaadhka wadahaladaasi oo ku waday Magaalada Addis Ababa ee Dalka Itoobiya.
Wadahadalada u dhexeeya Xukuumadda Somaliland iyo kooxda Cali Khaliif ayaa la filayaa inay dhawaan ka bilaabmaan Caasimadda Itoobiya, iaydoo lagu wado in wadahaladu bilaabmi doonaan marka uu Madaxwaynuhu ka soo noqdo safarka uu ku tagi doono qaybo ka mid ah qaaradda Yurub.
Wadahaladan oo in muddo ah aan la shaacin ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay ka dib markii hogaamiyaha Maleeshiyaadka Khaatumo sheegay inuu wadahadal la galayo Somaliland, arrinkaas oo ay Xukuumadduna soo dhawaysay.
Waxa jira Khilaaf xoog leh oo soo kala dhexgalay Kooxda Cali Khaliif, ka dib markii qaar ka mid ah ay soo jeediyeen inaan wax wadahadal ah lala gelin Xukuumadda Somaliland, basle Cali Khaliif Galaydh ayaa ku adkaystay inaan dadkiisa waxba u oollin muqdisho isla markaana uu sheegay inuu ka rajo dhigay, waxaana uu intaasi raaciyey inuu mar uun rajaynao inuu Madaxwayne ka noqdo Somaliland.